पुडासैनीको अन्तिम भिडियो सार्वजनिक भएपछि रवि लामिछाने भने ‘आरोप लगाउने म’रेर गएपनि आरोप खेप्ने म जिउदै छु’ - Nepal Insider
Home/समाचार/पुडासैनीको अन्तिम भिडियो सार्वजनिक भएपछि रवि लामिछाने भने ‘आरोप लगाउने म’रेर गएपनि आरोप खेप्ने म जिउदै छु’
पुडासैनीको अन्तिम भिडियो सार्वजनिक भएपछि रवि लामिछाने भने ‘आरोप लगाउने म’रेर गएपनि आरोप खेप्ने म जिउदै छु’
काठमाण्डौं, २९ साउन । पत्रकार शालिकराम पुडाशैनीले आ८त्मह८त्या गर्नुअघि रेकर्ड गरेमो भिडियो सामग्री अहिले सार्वजनिक भएको छ । भिडियोमा आफुलाई पत्रकार रवि लामिछानले आ८त्म्ह८त्या गर्न वाध्य पारेको बताएका छन् । यस्तो भिडियो सार्वजनिक भएपछि पत्रकार लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टिकरण दिएका छन् । उनले स्टाटस लेख्दै शालिकराम पुडासैनीलाई ठूलो भ्रम परेको बताएका छन्
सबारी चालक अनुमति पत्र बारे आयो एस्तो खबर पुरा पढ़नुहोस् !
ज्वाइलाइ ढुङ्गा प्रहार गरि हत्या , घटनाको रहस्य थाहा पाउँदा प्रहरीनै चकित
तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? यि उपाय अपनाउनुहोस् गज्जबसँग वचत हुन्छ
अनमोलसँग विवाह गर्न चाहन्छिन् सुहाना
होटलमा जुवा-तासको खाल, ‘डेढ लाखसहित ८ जना पक्राउ’